June 23, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
စေတီတော် ရောင်ကြည်တော်ကွန့်မြူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ အများ ဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
စေတီတော် ရောင်ကြည်တော်ကွန့်မြူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ အများ ဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်စေတီတော် ရောင်ကြည်တော်ကွန့်မြူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ အများ ဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် စေတီတော် ရောင်ကြည်တော်ကွန့်မြူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ အများ ဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်စေတီတော် ရောင်ကြည်တော်ကွန့်မြူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ အများ ဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ရှယ်ကြည့်လိုက်ပါနာရီးပိုင်း အတွင်ငွေဝင်ပါလိမ့်မည် ယုံကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ရှယ်ကြည့်လိုက်ပါနာရီးပိုင်း အတွင်ငွေဝင်ပါလိမ့်မည် ယုံကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ရှယ်ကြည့်လိုက်ပါနာရီးပိုင်း အတွင်ငွေဝင်ပါလိမ့်မည် ယုံကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ရှယ်ကြည့်လိုက်ပါနာရီးပိုင်း အတွင်ငွေဝင်ပါလိမ့်မည် ယုံကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ရှယ်ကြည့်လိုက်ပါနာရီးပိုင်း အတွင်ငွေဝင်ပါလိမ့်မည် ယုံကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်
သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ . . .
သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ . . .သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ . . . သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ . . သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ . . .
ခြေလက်တွေလှုပ်ရှားလို့ရသည်အထိ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ဦးမန်းဝင်း
ခြေလက်တွေလှုပ်ရှားလို့ရသည်အထိ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ဦးမန်းဝင်းခြေလက်တွေလှုပ်ရှားလို့ရသည်အထိ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ဦးမန်းဝင်း ခြေလက်တွေလှုပ်ရှားလို့ရသည်အထိ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ဦးမန်းဝင်းခြေလက်တွေလှုပ်ရှားလို့ရသည်အထိ ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်ဦးမန်းဝင်း
တပ်မတော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်ကေသီအောင်
တပ်မတော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်ကေသီအောင်တပ်မတော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်ကေသီအောင် တပ်မတော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်ကေသီအောင်တပ်မတော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်ကေသီအောင်
သမ္မတ ရာထူးက အနားယူပြီး ဂန္ဓမာပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး . . .
သမ္မတ ရာထူးက အနားယူပြီး ဂန္ဓမာပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး . . .သမ္မတ ရာထူးက အနားယူပြီး ဂန္ဓမာပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး . . . သမ္မတ ရာထူးက အနားယူပြီး ဂန္ဓမာပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး . . .သမ္မတ ရာထူးက အနားယူပြီး ဂန္ဓမာပန်းရောင်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီး . . .
မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကျောင်းဆောင်အသစ်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ သိန်း(၃၀၀၀)တိတိ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ
မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကျောင်းဆောင်အသစ်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ သိန်း(၃၀၀၀)တိတိ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံမွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကျောင်းဆောင်အသစ်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ သိန်း(၃၀၀၀)တိတိ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကျောင်းဆောင်အသစ်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ သိန်း(၃၀၀၀)တိတိ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံမွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကျောင်းဆောင်အသစ်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ သိန်း(၃၀၀၀)တိတိ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ
ကြံခင်း ဇွန် ၂၃/၂၀၂၀ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကြံခင်းမြို့နယ်ဘက်ရဲမြို့ရဲစခန်းပိုင်နယ်မြေ ရှောက်ခုံကျေးရွာအုပ်စုတွင်ဇွန်လ၂၁ ရက်နေ့၌(၈)နှစ် အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်အားသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာရှောက်ခုံကျေးရွာအုပ်စု နေမိခင်ဖြစ်သူအိမ်မှာရှိနေစဉ် သမီးဖြစ်သူမကေသီ(အမည်လွှဲ)မှနေအိမ်ချင်းကပ်လျက် ခြေရင်းဘက်တွင်နေထိုင်သူခင်ပွန်း၏ဦးလေးတော်စပ်သူနေအိမ်သို့သွားရောက်ဆော့ကစားနေစဉ်(၂၀)မိနစ်ခန့်အကြာ၌ မိခင်ဖြစ်သူမှသမီးအား လှမ်းခေါ်သဖြင့် ပြန်ရောက်ရှိလာကြောင်းဆိုသည်။ ညနေ ၆ နာရီခန့်အချိန်တွင်သမီးဖြစ်သူ မကေသီ(အမည်လွှဲ)မှနေအိမ်အိမ်နောက်ဘက်တွင်ဆီးသွားစဉ်စပ်တယ်ဟုပြော ဆိုနေသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူမှသမီးအားမေးမြန်းခဲ့ရာ အိမ်ချင်းကပ်ခြေရင်းဘက်တွင်နေထိုင်သူခင်ပွန်း၏ဦးလေး၏သားဖြစ်သူ မှကျော်လင်းထွန်း(ခ)ကိုဝိုင်း(၂၆)နှစ်မှ နေအိမ်ပေါ်တွင် မကေသီ(အမည်လွှဲ)၏စကပ်အားလှန်၍ဘောင်းဘီအားဒူးအော က်အထိဆွဲချွတ်ခဲ့ပြီးပါးစပ်အားအဝတ်စုတ်ဖြင့်ပိတ်ခဲ့၍သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ သမီးဖြစ်သူ၏ဖြစ်စဉ်အား ခင်ပွန်းနှင့်မိသားစုဝင်များအားပြောပြခဲ့သော်လည်း၊ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်နေသဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်လိုခြင်းမရှိသော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ဘက်ရဲနယ်မြေရဲစခန်းသို့ မိခင်ဖြစ်သူမှတိုင်တန်းခဲ့ရာ နယ်မြေရဲစခန်းမှ(ပ)၃၃၃/၂၀၂၀ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁ဖြင့်ကျော်လင်းထွ န်း(ခ)ကိုဝိုင်းအားအမှုဖွင့်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှသိရသည်။ ဧရာဝတီ (တာတေ)
မြန်မာပြည် ကိုဗစ်ကာလနောက်ပိုင်းမှာ လူတိုင်းနီးပါး ဖြစ်လာနေတဲ့ ရောဂါတခု အကြောင်း
ကိုဗစ် ကာလနောက်ပိုင်း ဆေးခန်းကိုလာတဲ့ လူနာတော်တော်များများဆီက ကြားရတတ်တဲ့ ကွန်ပလိန်းက “အကြောတွေတက်တယ်ဆရာ” တဲ့။ အဲ့ဒီအကြောတက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက ဆရာဝန်တော်တော်များများခေါင်းခြောက်ရတဲ့ပြဿနာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက နာတာလည်းမဟုတ်၊ ကိုက်တာလည်းမဟုတ်၊ သိသိသာသာရောင်ရမ်းနေတာလည်းမဟုတ်တော့ လူနာတွေအနေနဲ့ကလည်း တိတိပပပြောရခက်။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ကလည်း စမ်းဖို့ခက်တဲ့လက္ခဏာမျိုးပါ။ Vague symptom လို့ခေါ်တဲ့ တိကျပြတ်သားမှုမရှိတဲ့ ဝါးတားတားလက္ခဏာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ၁၅ နှစ်လောက် GP ထိုင်၊ ဆေးကုလာတဲ့အတွေ့အကြုံအရ ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောတက်တယ်လို့ပြောလာရင် (ကိုယ့်တဦးတည်းအမြင်အရ) Vague symptom လို့ မသတ်မှတ်တော့ပါဘူး။ ရောဂါဖြစ်စဉ်ကိုတိတိကျကျသိရဖို့အတွက် သူတို့ကိုပြန်မေးဖို့မေးခွန်းတွေက အဆင်သင့်ရှိနေပါပြီ။ Read more
ရွှေတွေအများကြီးဝယ်စုနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန် ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဝါဝါအောင်.. ဗဟုသုတရအောင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်
ရွှေတွေအများကြီးဝယ်စုနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန် ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဝါဝါအောင်.. ဗဟုသုတရအောင်ဖတ်ကြည့်ပါနော် ဝါဝါအောင်က လက်ဝတ်ရတနာတွေထဲမှာ ရွှေထည်တွေ ဝယ်စုရတာ ပိုအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ရွှေက ပြန်ရောင်းလို့ ရတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်…။ “ အန်တီဝါက ရွှေစုရတာ ဝါသနာပါတယ်၊ သဘောလည်း ဝါဝါအောင်က လက်ဝတ်ရတနာတွေထဲမှာ ရွှေထည်တွေ ဝယ်စုရတာ ပိုအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ရွှေက ပြန်ရောင်းလို့ ရတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်…။ “ အန်တီဝါက ရွှေစုရတာ ဝါသနာပါတယ်၊ Read more